घर जग्गा, धितो | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: रियल एस्टेट, बंधक
के मैले समय भन्दा अगाडी एक बंधक राख्नु पर्छ?
के मैले मेरो धितो तालिका भन्दा पहिले भुक्तान गर्नुपर्छ? त्यहाँ कुनै फाइदा छैन, तपाईले सम्झौतामा निर्दिष्ट ब्याज तिर्नुहुनेछ, यद्यपि प्रत्येक बैंकले यस्तै अवस्थामा आफ्नै लाभ प्रदान गर्न सक्छ, त्यसैले म यो मुद्दाको साथ समाधान गर्न सिफारिस गर्दछु ...
के म कोठा खरीद गर्दा मातृभाषाको प्रयोग गर्न सक्छु? र कसरी गर्ने?
के म कोठा खरीद गर्दा मातृत्व पूंजी प्रयोग गर्न सक्छु? तपाईं यो कसरी गर्नुहुन्छ? मातृत्व पूंजी धितो loanण चुक्ता गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। बैंकहरूको सीमित संख्याले कोठा roomsण दिइरहेको छ। सम्पत्ति खरीद गर्दै ...
"किस्तहरूद्वारा अपार्टमेन्ट" भनेको के हो?
"किश्तोंद्वारा अपार्टमेन्ट" भनेको के हो? धितो loanण एक किस्त योजना भन्दा फरक छ। सबै भन्दा पहिले, यी समय हो। केवल केही विकासकर्ताहरूसँग 510१० बर्षको दीर्घकालीन स्थापना कार्यक्रमहरू छन्। धेरैले एक बर्षसम्म किस्ता प्रदान गर्छन्। यी…
ऋण पुन: निर्माण गर्ने के हो?
Restण पुनर्गठन यो के हो? यदि तपाइँले loanण प्राप्त गर्नुभयो र कुनै कारणले यसको भुक्तान गर्न कुनै सम्भावना छैन भने, त्यसपछि तपाइँ debtण पुन: संरचनाको लागि बैंकमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ: त्यो हो, तपाइँलाई स्थगित गर्न प्रस्ताव गर्न सकिन्छ।
"बगैंचा पुस्तकले बेचेको" के हो? के यस्तो कुटीज किन्न लायक छ?
"बगैंचा पुस्तकले बेचेको" के हो? के यस्तो कुटीज किन्न लायक छ? "बगैंचा पुस्तक", वा "सदस्यता पुस्तक" एक कागजात हो जुन कुनै पनि बगैंचा, ग्रीष्मकालीन कुटीर वा कुनै व्यक्तिको सदस्यता पुष्टि गर्दछ।
उदाहरणका लागि अपार्टमेन्टको लागि नि: शुल्क बिक्री के हो
नि: शुल्क बिक्री के हो, उदाहरणका लागि, अपार्टमेन्टहरू त्यहाँ वैकल्पिक सम्झौताहरू छन् - तपाईं आफ्नो बेच्नुहुन्छ, तपाईं अर्को किन्नुहुन्छ, र त्यहाँ एक शुद्ध बिक्री छ - तपाईंलाई पैसा चाहिन्छ! ... नि: शुल्क-वस्तु (अपार्टमेन्ट) मा लगाइएको दायित्वहरूको साथ संलग्न गरिएको छैन -इन ...
"ALTERNATIVE" को साथ एक अपार्टमेंटको बिक्री र खरीदको लागि लेनदेन भनेको के हो?
"ALTERNATIVE" को साथ एक अपार्टमेंटको खरीद र बिक्रीको लेनदेनको अर्थ के हो? त्यो हो, कि त तपाईं अपार्टमेन्ट किन्नुहुन्छ वा न कि) = तपाईं यो अपार्टमेन्ट किन्नुहुन्छ, वा तपाईंलाई अर्को प्रस्ताव गरिनेछ। तपाईं राम्रो असहमत ...
नयाँ भवन वा माध्यमिक आवास!
नयाँ भवन वा माध्यमिक आवास! मँ सबै नयाँ किन्छु। अब तपाईं माध्यमिक आवासको तुलनामा सस्तोमा अन्तिमको साथ नयाँ खरीद गर्न सक्नुहुन्छ, यो सबै स्थितिमा निर्भर गर्दछ, सबैभन्दा पहिले, तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ वा नहुनु हुन्छ। यदि…
अपार्टमेन्ट बेच्दा कति प्रतिशतले रियलटर्स लिन्छन्?
अपार्टमेन्ट बेच्दा रियाल्टर्सहरू प्रायः कति ब्याज लिन्छन्? म%% को लागी सहमत छु यो कुन क्षेत्र मा निर्भर गर्दछ। हामीसँग २% बाट २% छ! तर हामीले कुराकानी गर्नै पर्छ! हामीसँग, यो सामान्य रूपमा मिलाइएको हुन्छ ...
घरमा अपार्टमेन्ट बेच्ने बारेमा कुन असामान्य विज्ञापन तपाइँ सम्झनुहुन्छ?
तपाइँको घरमा अपार्टमेन्टको बिक्रीको लागि कस्तो असामान्य विज्ञापनहरू याद छ? म मस्कोको बीचमा एउटा अपार्टमेन्ट बेच्ने छु, वा यसलाई तुला क्षेत्रको शहरी प्रकारको बस्तीमा परिवर्तन गर्ने। ——————- साना बच्चाहरू, धुम्रपान न गर्नेहरूका लागि परिवारका लागि अपार्टमेन्ट भाँडामा लिदै ...
तपाईं कसरी निजी घरको बजार मूल्यको गणना गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईं कसरी एक निजी घर को सब भन्दा बजार मूल्य गणना गर्न सक्नुहुन्छ? यो सजिलो हुन सक्दैन .. व्यक्तिगतमा लेख्नुहोस् म तपाईंलाई बताउँछु .. मैले दुई पटक मेरो सम्पत्ति मूल्यांकन गरेको छु .. मैले यसलाई पत्ता लगाएँ .. र यदि यो सजिलो छ भने ... बजार मूल्य अनुरोधमा आधारित छ .. तपाईं यसलाई विज्ञापनबाट लिनुहुन्छ ...
साझा गरिएको के हो?
इक्विटी निर्माण के हो? इक्विटी निर्माण भनेको के हो? आवास निर्माणमा इक्विटीको सहभागिता हाम्रो देशमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ। निर्माण र लगानी कम्पनीहरूले इक्विटी होल्डरहरू (लगानीकर्ता) बाट रकम आकर्षित गर्छन्, र ...
धितोमा "डाउन भुक्तानी" भनेको के हो?
धितोमा "डाउन भुक्तानी" भनेको के हो? निर्माणमा इक्विटी सहभागिताको त्रिपक्षीय सम्झौता (यदि निर्माण चरणमा) वा खरीद र बिक्री सम्झौता (यदि घर भाडामा दिइएको छ भने) समाप्त हुन्छ। + loanण सम्झौता। Rणी
सुश्री realtors, जो सामना गरे?
MGSN रियाल्टर्सहरू जसले सामना गरे? यो राम्रो छ तपाइँको साथीको एजेन्ट को सेवाहरु को उपयोग गर्न को लागी ... उदाहरणका लागि मस्कोका अधिकांश एजेन्सीहरूले उनीहरूका कर्मचारीहरू - एजेन्टहरू मात्र होइन उनीहरूका ग्राहकहरूलाई पनि धोका दिन्छन् ... र के ...
कसरी "आउनुहोस्" वा "आउनुहोस्" सहि कसरी लेख्ने?
कसरी "आउनुहोस्" वा "आउनुहोस्" सहि कसरी लेख्ने? केवल - आउनुहोस् आऊ आऊ आनुहोस् आऊ? हामीहरू मध्ये कसले विश्वस्त भई भन्न सक्दछौं कि उनले एक शब्द लेख्ने बारेमा कहिल्यै सोचेका थिएनन् ...
भाँडा कस्लाई भनियो? भाडामा लिने काम गर्ने मानिस जस्तो हुन्छ।
भाँडा कस्लाई भनिएको छ? भाडामा लिने काम गर्ने मानिस जस्तो हुन्छ। ज्यादै जग्गा मालिक - भाँडामा लिस्सी लिन्छ। भाँडादार / घरमालिक - मालिक जग्गा मालिक! र ...
भाडाको लागि के हो? र कसरी मासिक भाडा शुल्कबाट फरक छ?
भाडा शुल्क के हो? र यो कसरी मासिक भाँडा भन्दा भिन्न छ? भाडा आयोग? हुनसक्छ एजेन्टको लागि एक आयोग हो?) यदि हो भने, त्यसो भए यी पैसा हुन् जुन तपाईं एजेन्टलाई तिर्नुहुनेछ।
Realtors प्रश्न मस्को र कुन जिल्लामा भाडाको लागि एक अपार्टमेन्ट खरीद गर्ने।
Realtors को लागी एक प्रश्न। कुन र मस्कोको कुन जिल्लामा भाँडामा अपार्टमेन्ट किन्नको लागि। आदर्श अपार्टमेन्टहरू मेट्रोबाट टाढा हिँडिरहेका छन्) लगभग कुनै पनि क्षेत्र, तर यो केन्द्रको नजिक सकेसम्म राम्रो हुनु राम्रो हुन्छ ...
धितो ब्याज कसरी गणना गरिन्छ? उदाहरण को लागी, म १० बर्ष को लागी १,००,००० रूबल लिन्छु, १२ बर्ष प्रतिवर्ष, यसकारण म तिर्नेछु
धितो ब्याज कसरी गणना गरिन्छ? उदाहरण को लागी, म १० बर्ष को लागी १,००,००० रूबल लिन्छु, १२ बर्ष प्रतिवर्ष, जसको अर्थ म १,००,००० रूबलको प्रारम्भिक रकमको १२% भुक्तान गर्नेछु। यो को बारे मा बाहिर जान्छ ...
बेल्कीनको कथा "The युवा महिला-किसान" का एक संक्षिप्त सार दिनुहोस्
बेल्किनको कथा "द यंग लेडी-किसान" का एक संक्षिप्त सार दिनुहोस्, आफ्नै टुगिलोभको एस्टेटमा रहेको एउटा टाढाको प्रान्तमा त्यहाँ एक अवकाशप्राप्त गार्डसमूह इभान पेट्रोभिच बेरेस्टोभ बस्दछन्, जो लामो समयदेखि विधवा भइसकेका छन् र कतै पनि जाँदैनन्। ऊ घरमा संलग्न छ ...
53 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,851 प्रश्नहरू।